သင် သိပ်မစားဖြစ်တဲ့ အကောင်းဆုံး အစားအစာများ ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
သိသူ ဖော်စား မသိသူကျော်သွား ဆို သလိုပဲ တချို.သော အစားအစာများ မှ လူ့ ကျန်းမာရေး
အတွက် အင်မတန်မှူ အကျိူးပြုသော်လည်း ပဲ အိမ်ရှင်မတွေရဲ. ဈေးခြင်းတောင်းတွေ မှာ
၀ယ်လာတာ သိပ် မတွေ. ရပါဘူး။ ထိုအစား အစာ တွေ ကတော့
မုန်လာဥနီ ဟာ အခြားသော အသီးအရွက်များ နှင်. နိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ် ချို
ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွတ်လဲ ဆိုတော့ အနီေ၇ာင် သန်းတဲ့ သစ်သီးများ
ဟာ အများသောအာားဖြင့်သွေးတိုး ခြင်းကို ကာကွယ်သောကြောင့် သွေးလွတ်ကြော၊
ပျက်စီမှု ပမာ ဏ ကို နည်းပါးစေပါတယ်။ သွေးတိုးခြင်းရဲ. အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးရောဂါ
ဖြစ်ပွား မှုကို ပါ တားဆီးပေးနိုင်တယ်လေ။ မုန်လာဥနီရဲ့ သဘာဝ အနီရောင် ဟာ ကင်ဆာ
ရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုကို အပြင်းထန် တားဆီးနိုင်ကြောင်း ကြွက်များဖြင့် ဓါတ်ခွဲ ခန်းတွင်
စမ်းသပ်ချက်များ က သက်သေထူခဲ့သည်။
အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတွေ စားလေ့ မရှိကျပေမဲ့ အာာရှတိုက်ကလူတွေက တော့
စားလေ့ရှိပါတယ်။ ဂေါ်ဖီတထုပ် လေးမှာတင် ၂၂ ကယ်လိုရီပါဝင်တယ်လေ။
ကိုယ်တွင်းဆဲလ်များ ပျက် ဆီးခြင်း ကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနူန်း လဲ
သိပ် လူကြိုက်မများ တဲ့ သစ်သီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာလဲ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ ဖရဲသီးတို့ထက်
ခန္ဒာကိုယ် အတွက် များစွား အကျိုးပြုပါတယ်။ အသီး တသီးမှာတင် ၆၈၈ မီလီဂရမ် ရှိတဲ့
ပိုတက်စီယံ ကိုရရှိစေပြီး ငှက်ပျော်သီး ၁ ခု မှာ ပါဝင် တဲ့ ပိုတက်စီယံ ထက် ၆၃
ရာခိုင်နူန်းပိုပါတယ်။ နောက်ပြီး လူခန္ဒာကိုယ် အတွက် အကျိုးပြု စေသော Fiber ကိုပါ